काम गरेर गिनिज बुकमा रेकर्ड राख्यौं भन्ने ओलीलाई गगनको कडा काउन्टर !
काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसक प्रभावशाली नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन कुमार थापाले वर्तमान सरकारले गति लिन नसकेको बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै थापाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गति लिन नसकेको आरोप लगाएका हुन्।
सरकारले जुन गति लिनु पर्ने हो, त्यो गति लिन नसकिरहेको थापाले बताए। सरकारले गति लिन नसकेको देखेर आफूहरुलाई डर लाग्न थालेको गगनको भनाई छ। पूर्वमन्त्री समेत रहेका थापाले भने,”सरकारले जुन गति पक्रनु पर्ने हो, त्यो गति हामीले पक्रन सकेका छैनौँ, त्यसैले डर लागेको छ।”
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछिको समय खेर गएको उल्लेख गर्दै थापाले अबको समय पनि बेकार त हुने होइन भन्ने शंका व्यक्त गरे। तत्कालै सम्हालिनु पर्ने अवस्थारहेको गगनको भनाई छ।
“नेपाली नागरिक भएर, जसरी हामीले २००७ सालपछिको समय खेर फाल्यौँ, फेरि हामीले अव अर्को मौका खेर फाल्दै छौ कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ, यो बेला सम्हालिनु पर्नेछ।”,उनले भने।
थापाले गएको तीन वर्ष खेर गएको पनि बताए। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रति लक्षित गर्दै थापाले गएको तीन वर्ष खेर गएको बताएका हुन्। केहि दिन अगाडी ओलीले आफ्नो पालामा रेकर्ड नै रेकर्ड बनाएको बताएको प्रति पनि थापाले काउन्टर फर्काए।
“लामो समयको अनुभव पछाडि संविधान ल्याएर नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यौ, फेरि नेपालले अर्को मौका पाएको फेरि २०७४ सालबाट एउटा सन्काहा शासकलाई गिनिज बुकमा नाम लेखाउने रहर चढ्दा तीन वर्ष खेर गयो।”,उनले भने।
के भनेका थिए ओलीले ?
बुधबार ओलीले नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थिए। त्यसक्रममा उनले आफ्नो पालामा भएका कामहरुको बारेमा चर्चा गरे। ओलीले विश्वमा कहीँ नभएको र कसैले गर्न नसकेको काम एमालेको नेतृत्वको सरकारले गरेको बताएका थिए।
“गिनिज बुकमा रेकर्ड राख्ने काम त कति भए कति”,ओलीले भनेका थिए,”रेकर्ड नराखेर मात्रै हो नत्र आधा गिनिज बुक त हाम्रै कामले भरिन्छ।”
प्रकाशित : शुक्रबार, कार्तिक ०५, २०७८१५:४०
पूर्वराजा माथि खनिए रामचन्द्र, धम्क्याउन थालेको आरोप !